Faahfaahin kasoo baxeysa weerarkii lagu qaaday Mandera – The Voice of Northeastern Kenya
Faahfaahin kasoo baxeysa weerarkii lagu qaaday Mandera
Star FM October 6, 2016
Masuuliyiinta maamulka iyo kuwa laamaha amaanka ee dalka ayaa sharaxaad ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerarkii xalay saqdii dhexe kadib laga fuliyay guri ku yaalla bartamaha magaalada Mandera.
Weerarkaasi oo ay geysteen dabley aan heybtooda la aqoonin oo lagu tuhunsanyahay al shabab ayaa lagu dilay 6 ruux, iyadoo 27 qof oo kalena la badbaadiyay.
Isbitaalka mandera ayaa la dhigay 3 qof oo ka mid ah 12 ruux oo ay dhaawacyo ka soo gaareen weerarkaasi oo sidoo kale lala beegsaday meherad ganacsi.
Isku duwaha dhanka amaanka ee Gobolka Waqooyi Bari oo ay ku wada yaallaan maamul goboleedyada Garissa , Wajir iyo Mandera Ambasador Maxamuud Saalax ayaa ka hadlay weerarkii xalay lagu qaaday guri ku yaala magaalada Mandera.
Maxamuud Saalax ayaa amaan u jeediyay ciidamada amaanka ee ka howl gala gobolka Waqooyi-bari, waxaana uu shacabka ka codsaday in ay la shaqeeyaan.
Weerarkii xalay ka dhacay Mandera ayaan ahayn kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo inta badan lagu bartilmaameedsado dadka aan kasoo jeedin deegaanka.
22-ki bishii November ee sanadkii 2014 ayaa weerar lagu qaaday Bas ku safrayay Mandera lagu dilay 28 qof oo u badnaa macalimiin aan kasoo jeedin gobolka Waqooyi bari, balse kasoo jeeda deegaannada kale ee Kenya.
2-dii bishii December ee sanadkii 2015-kina weerar ay masuuliyadiisa sheegteen al shabab oo laga fuliyay Mandera ayaa lagu dilay 36 qof oo ka shaqeyn jirtay dhagax qodista, kuwaasoo iyagana dhammaantood aan muslimiin ahayn isla markaana aan kasoo jeedin gobolka Waqooyi bari.
← Dagaalyahanno taageersan dowladda Ciraaq oo lagu dilay duqeyn
Isku shaandheyn lagu sameeyay saraakiisha booliska dalka →